Tuesday, 10.15.2019, 06:56pm (GMT+5.5) Home Contact
साझा सुधार्न अनशन
साझा प्रकाशनको नाजुक अवस्थामा सुधार ल्याउन दवाव दिने उद्देश्यले साझा प्रकाशन संचालक समितिका सदस्य तथा साहित्यकार नयराज पाण्डे अनशनमा बस्नुभएको छ ।
सरकारी संस्थान ः सुधारको विकल्प छैन
Monday, 09.12.2011, 03:07pm
मुलुकको आर्थिक वृद्धि र आत्मनिर्भरताको दिशातिर अग्रसर हुने गरी स्थापना गरिएको सरकारी संस्थाहरूको हालत अहिले नाजुक छ । निजीकरण, उदारीकरण र बजार अर्थतन्त्रका नाममा कतिपय संस्थानहरू कौडीको मोलमा बेचियो भने भएका संस्थानहरूमा पनि राजनीतिकरण गरेर ध्वस्त पारिएको छ ।
धर्म र अध्यात्म दुकान जस्तै बन्यो : वेदराज पन्त
Monday, 09.12.2011, 03:05pm
धर्म र अध्यात्मलाई व्यापार व्यवसायको दुकान जस्तै बनाएर पेशा वा वृत्ति चलाउने तथाकथित धर्म गुरु हुन् वा श्रीमद्भागवद् लगायत महापुराणलाई ज्ञानयज्ञको नाम दिंदै द्रव्य संकलन गर्ने वस्तु बनाउने वाचन शिरोमणिहरू हुन्, धर्मको नाममा गलत प्रयोग गरेर लोकप्रिय हुने पाखण्डपन पनि बेस्सरी मौलायो । देहाभिमानीहरूले त्यो पाखण्डलाई अरु मलजल थप्न ज्ञानयज्ञको नाममा आयोजना भएका स्थानमा दानको नाममा मोटो अंकको धनराशी भेटी चढाएर लोकैषणालाई तृप्त पार्ने कर्मलाई नै धर्म ठाने । यसरी अध्यात्मको स्रोत नै विस्मृतिको गर्तमा पुरियो । ज्ञानयज्ञ द्रव्ययज्ञमा परिणत भयो ।
कडा कार्बाहीको प्रतिक्षा
Monday, 09.12.2011, 03:01pm
जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्ने गरी सडेगलेको विषाक्त वस्तु प्रयोग गरेर खाद्य पदार्थ बनाउनेहरू राष्ट्रिय अपराधी नै हुन् । आफ्नो लोकप्रियताको गलत फाइदा उठाई जनतालाई ठग्ने त्यस्ता तत्वलाई कडाभन्दा कडा कानुनी कार्बाही गर्नुको विकल्प छैन तापनि नेपालको उपभोक्ता हित ऐनले त्यस्ता व्यापारीहरूलाई हदैसम्मको दण्ड दिने व्यवस्था गरेको छैन ।
शिविर नै हस्तान्तरण भैसकेपछि साँचो त्यसबाट अलग हुनसक्दैन : जनार्दन शर्मा, नेता एकीकृत नेकपा माओ�
Monday, 09.12.2011, 02:58pm
शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने सवालमा माओवादी पार्टीले चालेको कदमलाई सबैले स्वागत गरेका छन् । भदौ १५ गते जुन काम सम्पन्न भयो त्यो सेना समायोजन विशेष समितिको बैठकले गरेको निर्णय हो । एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउने गरी काम अघि बढाउने सर्वसम्मत निर्णय भएअनुसार नै सो काम भएको हो । अहिले हतियारको साँचो पहिले बुझाउनु हुँदैनथ्यो भन्ने कुरा पनि बाहिर आइरहेका छन् । अब निर्णय भैसक्यो, काम सकिइसक्यो । यसमा विरोध गर्नुको अर्थ छैन । शिविरमा रहेका जनमुक्ति सेनाका लडाकुहरू सेना समायोजन विशेष समिति अन्तर्गत जाने तर त्यहाँ रहेका हतियार समितिमा नजाने भन्ने त हुँदैन । सेना नै समिति अन्तर्गत गैसकेपछि हतियार राखेको भण्डारको साँचो आफैंले राख्नुपर्छ भन्नु त्यति जायज होइन ।
राजनीति गर्नेलाई मात्र सबै दोष दिएर हुँदैन : यादब देवकोटा
Monday, 09.12.2011, 02:57pm
मुलुकको आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरणमा सरकारको मात्र नभएर हरेक नागरिकको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । सरकार, राजनीतिक दल र नागरिकको संयुक्त सक्रियताले मात्र कुनै पनि मुलुकले उन्नति गर्नसक्छ । राष्ट्र बनाउने अभियानमा सरकारले जनतालाई क्रियाशील गराउने परिस्थितिको सिर्जना गर्नुपर्छ भने राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई राष्ट्रिय विकासमा अग्रसर गराउनु पर्दछ ।
जनता झुक्याउने विद्या पढेकाहरू : महेश्वर शर्मा
Monday, 09.12.2011, 02:56pm
जनता झुक्याउन नेता हुँ भन्नेहरूले अनेक ओली जानेका छन् । २०४७ सालको संविधान त खाएकै थिए, नयाँ संविधान बनाउने नाममा तीन चार वर्ष फेरि ठगेर खाए । अझै पनि नयाँ संविधान बनेपछि ‘नयाँ नेपाल’ बन्छ भन्न छोडेका छैनन् । संविधान बनाउँदैमा नयाँ नेपाल बन्ने भए २०४७ सालकै संविधानबाट बनिसक्थ्यो ।
अभिमन्यूहरूलाई चक्रव्यूहमा पारेर सिध्याइएको छ
Monday, 09.12.2011, 02:53pm
देशको वर्तमान परिवेश र परिस्थितिमा "सहस्र बाहु इन्द्र"ले समेत रामराज्य ल्याउन नसक्ने ठोकुवा गरेर भन्न सकिन्छ । अतः यस्तो देशमा आफैले एकलव्य ठान्दै आएका यौटा डा. बाबुरामले कुनै बहादुरी गरेर देखाउनसक्ने सम्भावना किमार्थ थिएन । तथापि कुनै न कुनै व्यक्ति राज्यसत्ता नियन्ता बन्नु बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति थियो ।
ग्राउण्ड जिरोमा भव्य स्मृतिसभा
Monday, 09.12.2011, 02:47pm
अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी सञ्जाल अलकायदाले अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित जुम्ल्याहा भवनमा आक्रमण गरेको १० वर्ष पूरा हुँदा एक भव्य स्मृतिसभाको आयोजना गरियो । सेप्टेम्बर ११, २००१ मा अमेरिकामा अयकालदाले गरेको अकल्पनीय आतंकवादी हमला गरेको थियो ।
पश्चिम सेतीमा लगानी भित्रिने आशा
Tuesday, 09.06.2011, 12:02pm
चीनको एक्जिम बैंकले पश्चिम सेतीका लागि एक खर्ब १० अर्ब बराबरको ऋण लगानी गर्न सहमत भएको छ । निवर्तमान ऊर्जा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले पश्चिम सेतीमा लगानी जुटिसकेको र सम्झौता हुन मात्र बाँकी रहेको धारणा प्रवाह गरेलगत्तै सरकार परिवर्तन भएका कारण लगानी सम्झौता केही पर धकेलिएको भए पनि पश्चिम सेती नेपालको आवश्यकता पूर्ति गर्ने गरी निर्माण हुने आशा पलाएको हो ।
धर्म र विज्ञानको सूक्ष्म विश्लेषण
Tuesday, 09.06.2011, 12:00pm
समयको गतिशीलताका साथै विविध घटना र कालक्रममा पटकपटक चिन्तन गर्नु नै अनुचिन्तन हो । सबै आदि ज्ञान सर्वप्रथम लिपिबद्ध भएको अभिलेखलाई यसकारण वेद भनियो । वेदको शाब्दिक र लाक्षणिक अर्थ ज्ञान हो पनि भनियो । लिपिबद्ध भएको होस् या नभएको ‘ज्ञान अथवा वेदको स्रोत चेतना हो । प्राच्यका चिन्तकका दृष्टिमा सृष्टि संरचनाको मूलतत्व नै यही हो ।
Monday, 09.05.2011, 01:42pm
एकपटक सत्ता र शक्तिमा पुगेपछि सरकारी ढेकेटी आफ्नै पेवा ठानेर दुरुपयोग गर्ने गलत प्रवृत्तिको विकास भैरहेका बेला प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेपालमै बनेको मोटर चढ्ने घोषणा गर्नुभयो । उहाँ अहिले हुलास मोटरले निर्माण गरेको मुस्ताङ म्याक्समा चढी सिंहदरबार पुगेर काम गरिरहनुभएको छ । उहाँको यो कदमले पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा शक्तिशाली दलका नेताहरूलाई ठूलो नैतिक झापड दिएको छ ।
प्रान्त भनेको एउटा समूदाय वा वर्गका लागि मात्र होइन : डा. दिनेश त्रिपाठी, संविधानविद्
Monday, 09.05.2011, 01:39pm
संघीयता भन्ने कुरा आफैमा जटिल विषय हो । संघीय प्रान्तहरू निर्माण गर्न पर्याप्त समय आवश्यक पर्छ । किनभने यसमा भूगोल, जनसंख्या, प्राकृतिक सोत साधन, जातिगत परिचय लगायतका यावत पक्षहरूको सन्तुलन र समायोजन मिलाउनपर्ने हुन्छ । तर, अहिले संघीयताको मुद्दाले संविधान लेखन कार्यमा ढिलाइ भएको अवस्था होइन । प्रमुख राजनीतिक दलहरूको दृढ इच्छाशक्ति भयो भने संविधान निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सक्दछ । संघीयतामा जाने विषयलाई नीतिगत रुपमा संविधानमा सुनिश्चित गरेपछि यसको संख्या, आकार, सीमांकन र नक्शांकन कार्य पछि गर्दा पनि हुन्छ ।
» प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईबाट शपथग्रहण : शान्ति, संविधान र राष्ट्रिय सहमति प्रमुख चुनौति
» सोचेजस्तो सजिलो छैन संविधान बनाउन
» प्रधानमन्त्रीका लागि भयो यस्तो दौडधूप
» अनर्गल अलाप-विलापको निरन्तरता
» नाकामा लुटिने क्रम बढ्यो
» समस्या सिर्जना राजनीतिबाटै
» तालाबन्दी समस्याको समाधान होइन : प्रा. विजयबहादुर सिलवाल, अध्यक्ष नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक स�
» मुलुक पुनः बहुमतीय प्रणालीमा जाने निश्चित
Page 112/115: « :: ... 109 110 111 112 113 114 115 »